16 Ngokuphathelene nokuqoqwa komnikelo+ ongowabangcwele,+ njengoba nje ngayala amabandla aseGalathiya,+ nani yenzani ngaleyo ndlela. 2 Njalo ngosuku lokuqala lwesonto yilowo nalowo kini endlini yakhe makabeke eceleni okuthile, kuye ngokuchuma kwakhe, ukuze kuthi lapho ngifika, ukuqoqwa kweminikelo kungenzeki ngaleso sikhathi. 3 Kodwa uma ngifika lapho, noma yibaphi abantu enithi bayamukeleka ngezincwadi,+ labo bantu ngiyobathumela ukuba bayise isipho senu somusa eJerusalema. 4 Nokho, uma kufanele ukuba nami ngiye khona, bayokuya nami. 5 Kodwa ngizokuza kini uma sengidabule eMakedoniya, ngoba ngizodabula eMakedoniya;+ 6 futhi mhlawumbe ngizohlala ubusika noma buze budlule nginani, ukuze ningiphelezele+ ingxenye yendlela ukuya lapho ngingase ngiye khona. 7 Ngoba angifuni ukunibona njengamanje ekudluleni kwami, ngoba ngithemba ukuhlala isikhathi esithile nani,+ uma uJehova+ evuma.+ 8 Kodwa ngizohlala e-Efesu+ kuze kube umkhosi wePhentekoste; 9 ngoba ngivulelwe umnyango omkhulu oholela emsebenzini,+ kodwa kukhona abaphikisi abaningi. 10 Nokho, uma uThimothewu+ efika, qinisekani ukuba angesabi phakathi kwenu, ngoba wenza umsebenzi kaJehova,+ njengoba nje nami ngiwenza. 11 Ngakho-ke, makungabikho muntu ombukela phansi.+ Mphelezeleni ingxenye yendlela ngokuthula, ukuze afike lapha kimi, ngoba ngimlindile kanye nabazalwane. 12 Ngokuphathelene no-Apholo+ umzalwane, ngamncenga kakhulu ukuba eze kanye nabazalwane kini, kodwa nokho kwakungeyona neze intando yakhe ukuza manje; kodwa uzokuza lapho eba nethuba. 13 Hlalani niphapheme,+ nime niqinile okholweni,+ niqhubeke njengamadoda,+ nibe namandla.+ 14 Zonke izindaba zenu mazenzeke ngothando.+ 15 Manje ngiyanikhuthaza, bazalwane: Niyazi ukuthi umkhaya kaStefana ululibo+ lwase-Akhaya nokuthi wazilungisela ukuba ukhonze abangcwele.+ 16 Kwangathi nani ningaqhubeka futhi nizithoba kubantu balolo hlobo nakuwo wonke umuntu onobambiswano noshikashikekayo.+ 17 Kodwa ngiyajabula ngokuba khona kukaStefana+ noFortunatu no-Akhayiku, ngoba bavale isikhala sokungabikho kwenu lapha. 18 Ngoba bawuqabulile umoya+ wami nowenu. Ngakho-ke waziseni amadoda alolo hlobo.+ 19 Amabandla ase-Asiya ayakhonza kini.+ U-Akhwila noPriska kanye nebandla elisendlini+ yabo bayakhonza kini ngenhliziyo yonke eNkosini. 20 Bonke abazalwane bayakhonza kini. Bingelelanani ngokwanga okungcwele.+ 21 Nanku umkhonzo wami, okaPawulu, ngesandla sami siqu.+ 22 Uma noma ubani engayithandi iNkosi, makaqalekiswe.+ O Nkosi yethu, woza!+ 23 Kwangathi umusa ongafanelwe weNkosi uJesu ungaba nani. 24 Kwangathi uthando lwami lungaba nani nonke kuKristu Jesu.